Samoela - Wikipedia
I Samoela dia sady mpaminany no mpitsara. Izy no farany amin'ireo mpitsara tao Israely nandimby an'i Ely. Ny lovantsofina dia milaza fa izy no nanoratra ny Boky voalohany sy faharoan'i Samoela niaraka amin'i Gada sy i Natana. Niala amin'ny maha mpitsara azy izy tamin'ny nanosorany an'i Saoly ho mpanjaka, araka ny Boky voalohan'i Samoela (1Sam. 8-15) ary tapitra teo ny andron'ny mpitsara. Izy koa no nanosotra an'i Davida ho mpanjaka (1Sam. 16-31).
Manosotra an'i Davida ho mpanjaka i Samoela, sary nataon'i Jan Victors.
Nitondra an'i Samoela teo amin'i Ely i Ana reniny, sary nataon'i Gerbrand van den Eeckhout tamin'ny taona 1665.
Niseho tamin'i Saoly ny fanahin'i Samoela, sary nataon'i Salvator Rosa, taona 1668.
2 Ny tantarany araka ny Baiboly
3 Nanoratra boky, araka ny lovantsofina
Atao hoe שְׁמוּאֶל / Shemūʼēl, izay midika hoe "anaran' Andriamantra" na "ny anarany dia Andriamanitra", izy amin'ny teny hebreo. Amin'ny teny grika izy dia atao hoe Σαμουήλ / Samouél ary amin'ny teny arabo dia atao hoe صموئيل / Ṣamūʾīl.
Ny tantarany araka ny BaibolyHanova
Teraka tao Rama i Samoela. Raha mbola kely izy dia natokan-dreniny Ana ho an'Andriamanitra satria ninoany fa fanomezan'Andriamanitra i Samoela noho i Ana vehivavy momba. Nentin'i Ana hotezaina ao amin'ny mpisorombe Ely izy tamin'ny fahazazany. Rehefa lehibe i Samoela dia niverina tao Rama (1Sam. 7.17) ka tao izy no niasa amin'ny mpaha mpitsara azy sady ao koa no misy ny fasany (1Sam. 25.1). Nandritra ny fotoana nisian'ny fahasahiranan'ny firenena sy tamin'ny tetezamita teo amin'ny fitondràn'ny mpitsara sy ny fitondrà-mpanjaka dia nisahana andraikitra lehibe maokana i Samoela.
Taty aoriana rehefa tonga mpaminany antitra sy nalaza tao Israely i Samoela dia nanendry ny mpanjakan'ny Hebreo voalohany, dia i Saoly (na Saola), izay natoron'Andriamanitra azy. Nila mpanjaka tokoa ny Hebreo na dia tsy tian'i Samoela aza izany, satria hoy Andriamanitra tamin'i Samoela: "Henoy ny feon'ny vahoaka, satria tsy ianao no laviny fa Izaho, mba tsy hanjakako aminy intsony".
Rehefa tsy sitrak'Andriamanitra i Saoly dia nilaza tamin'i Samoela mba hanosotra olona hafa ho mpanjaka, dia i Davida izany, izay mbola zazalahy mpiandry ondry. Rehefa nadresy an'i Goliata i Davida dia nalaza be nihoatra an'i Saoly ka afaka nanomana azy amin'ny fanosorana sy fametrahana azy teo amin'ny toeran'ny mpanjaka amin'izay i Samoela. Taorian'ny nahafatesan'i Samoela, ny omalin'ny andro niadian'ny Hebreo sy ny Filistina teo amin'ny tendrombohitra Gelboa (na Gelboe), izay nahafaty an'i Saoly sy i Jonatana zanany, dia niteny tamin'ny mpamoha angatra tao Endora i Saoly mba hiantso ny fanahin'i Samoela ka hanoro hevitra azy (1Sam. 28.13). Nilaza ny hahafatesan'i Saoly i Samoela.
Nanoratra boky, araka ny lovantsofinaHanova
I Samoela no nanoratra ny Bokin'ny Mpitsara sy ny ampahan'ny Bokin'i Samoela izay nadraisan'ny mpaminany Gada anjara fanoratana koa araka ny lovantsofina jiosy.
Mpaminanin' i Israely
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Samoela&oldid=1041916"
Dernière modification le 19 Desambra 2021, à 04:49
Voaova farany tamin'ny 19 Desambra 2021 amin'ny 04:49 ity pejy ity.